I-XPivo7 yeVivo izoba yi-smartphone yokuqala ene-10 GB ye-RAM | Izindaba zamagajethi
IVivo's XPlay7 izoba yi-smartphone yokuqala ene-10 GB ye-RAM
Sekuyiminyaka embalwa, inkumbulo ye-RAM yamadivayisi eselula ibilokhu ikhula cishe ngokusobala. Lapho imemori engu-4 GB yayingaphezu kokwanele, amadivayisi ane-6 GB aqala ukufinyelela emakethe. Kuwo wonke unyaka odlule, abaningana babengabakhiqizi lokho baqala ukusebenzisa i-8 GB ye-RAM.
Isinyathelo esilandelayo ngu-10 GB. Okwamanje, kubonakala sengathi akekho noyedwa kubakhiqizi abakhulu othathe lesi sinyathelo, ngoba umphathi kuzoba ngumkhiqizi wase-Asia iVivo nge XPlay7, ukuphela okuzophathwa ngu I-10 GB ye-RAM ne-processor yakamuva evela ku-Qualcomm, i-Snapdragon 845.
Uma uvame ukulandela izindaba zomkhakha wezocingo, nakanjani le femu izokhala njengawe ngoba isibe ngumkhiqizi othengisa ama-smartphones amaningi e-China, ephelezelwa ngomunye umuntu osanda kufika obizwa nge-Oppo, oxoshe i-Xiaomi, Samsung ne-Apple kusuka phezulu 3 eminyakeni yamuva. Kepha, kungenzeka futhi ukuthi lo mkhiqizi uzwakale ejwayelekile kuwe, ngoba kube owokuqala ukuhlanganisa inzwa yezigxivizo zeminwe ngaphansi kwesikrini neX20 Plus, ithuluzi elinezici ezithile ezilungile, izongena emakethe ngama-550 euro ukuze ishintshe.
Kepha i-XPlay7, ayigcini ngokusinikeza i-10 GB ye-RAM ne-Snapdragon njengezici eziyinhloko, kepha ngaphezu kokuhlanganisa inzwa yeminwe ngaphansi kwesikrini, isinikeza isibonisi esimbozwa ngokusebenziseka kahle kuka-92,9% no-4k resolution, isistimu yekhamera engemuva ene-4x zoom zoom nobuchwepheshe be-Face Unlock, esivumela ukuthi sivule idivayisi ngobuso bethu. Ngokuqondene nokugcinwa kwangaphakathi, umenzi uzokwethula izinhlobo ezimbili ze-256 ne-512 GB. Okwamanje, asilazi usuku lokwethulwa noma intengo yalo esemthethweni, kepha sizokulalela ukukwazisa ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » IVivo's XPlay7 izoba yi-smartphone yokuqala ene-10 GB ye-RAM
Lawa ama-premieres afika kuNetflix naku-HBO ngoFebhuwari 2018
INokia 7 Plus, omunye wabaphikisi beMWC 2018 itholakele